Fanoherana · Marsa, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Marsa, 2016
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Marsa, 2016
Eoropa Afovoany & Atsinanana06 Marsa 2016
Amin'ny alàlan'ny bilaoginy, ezahan'ilay mpandika lahatsoratra, Thomas Campbell, ny hanentsina ny banga. Ny herinandro talohan'ny 18 Febroary, nitsidika ny Anjerimanontolon'i New York i Campbell, ka tany no namaritany ny zavatra niainany tamin'ny fitantanana ny tranonkalany sy ny fanarahana maso ny tontolon'ny bilaogy Rosiana.
Eoropa Afovoany & Atsinanana05 Marsa 2016
Tsy Misy Firenena Ho An'ireo Ankizy Tsy Manana Ray ao Bhutan
Azia Atsimo04 Marsa 2016
Ny lalàna henjana ao Bhutan momba ny zompirenena, dia tsy nanao zavatra betsaka hanosehana ny fiadanana amin'izao androntsika izao, satria noho ireo lalàna maro ao Bhutan dia an'arivony maro ireo ankizy Nepale nilaozan'ny rainy no nanjary olona tsy manana firenena niaviana.
Mpanakanto Mpanao Sary Mandefa Fanentanana Ety Anaty Aterineto Ho ‘Fanafahana Ny Media’ Ao Malezia
Azia Atsinanana03 Marsa 2016
"Tsapanay fa tonga izao ny fotoana ho an'ny Maleziana mba hitakiana ny fahalalahan'ny media sy ny aterineto, raha jerena tamin'ireo fanafihana faramparany nanjo ny fahalalahana maneho hevitra eto Malezia."
Mbola Hijanona Ho Mora Mitselatra Ihany Ve Ny Fiarahamonina Armeniana?
Azia Afovoany sy Kaokazy03 Marsa 2016
"Noho ny #ElectricYerevan hitantsika fa misy ireo fomba hafa tsaratsara kokoa azo atao. Dingana iray lehibe voalohany iny."
Any Bahrain, Heloka Bevava Ny Asa Fanaovana Gazety
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Marsa 2016
Voasambotra niaraka tamin'ireo ekipany i Anna Therese Day, Amerikana mpanao gazety, ary voaroaka tao amin'ilay firenena mikorontana raha teo am-pankalazàna ny tsingerintaona fahadimin'ny hetsika io firenena io.